Aadaa Oromoo, bu'uura tokkummaa Oromummaa
Aadaa Oromoo, bu'uura tokkummaa Oromummaa Featured
Akaakuuwwan shubbisaa godinootaafi magaalota Oromiyaa gara garaatiin dhihaatan hedduunsaanii adda adda. Kun immoo, wayaa aadaa isaan uffatanii shubbisanirraa kaasee hanga haala shubbisasaaniittis kan mul'atuudha. Inni tokko Eeboo harkatti qabatee yoo shubbisu kuun immoo shimala baatee akkasumas siinqee qabatatee shubbisa.
Nama takkaa dhimma kana argee hinbeekneef garuu agarsiifni kun kan ummata tokkoo hinfakkaatu. Ummata tokko keessatti akaakuuwwan shubbisaa adda addaa qabaachuun immoo qabeenya guddaa sabichaa kan agarsiisuudha.
Aadaafi aartii iddoorraa iddootti garaa garummaa qabu kana keessatti garuu tokkummaan yoomiyyuu cabuu hindandeenye tokko kan calaqqisu yemmuu ta'u, innis tokkummaa Oromummaati.
Yeroo ummanni Oromoo cunqursaa sirnoota gara garaa keessa ture sana aadaafi aartiin Oromoo dadhabaafi badaa dhufus, hangafootni Oromoo isaan Oromiyaa kibba bahaatti argaman ofiisaaniitii du'aafi baqachaa aadaa Oromoo tursiisuu danda'aniiru.
Torbee aadaafi aartii Oromiyaa achitti qopheessuun immoo ummata yeroo aadaa Oromoo agarsiisuun hafee Oromummaan yakka turetti aadaa sabichaa kunuunsee hadhaan ga'eef gahaa ta'uu baatus beekamtii kennuudha.
Caamsaa 22 kaasee hanga 26tti sagantaawwan gara garaatiin adeemsifamaa kan ture torbeen aadaa kun, barumsiifi muuxannoowwan heddu kan irraa argaman ta'uun ibsameera.
Sagantichi yeroo mootummaan gaaffii ummataa gama hundaan furuuf socho'aa jirutti qophaa'uunsaa kan adda isa taasisu ta'uu kan himan hooggantuun Biiroo Aadaafi Turiizimii Oromiyaa, Aadde Loomii Badhoo, aadaan Oromoo immoo bu'ura tokkummaa ummatichaa ta'uu dubbatu.
Namoota aadaafi aartii Oromoo guddisuufi beeksisuu keessatti shoora qaban jajjabeessuufi beekamtii kennuunis namoota quuqama aadaafi aartii qaban baay'inaan horachuuf kan gargaaru ta'uus ni ibsu. Sagantichi baruumsaafi muuxannoo danuun kan irraa fudhatame ta'uus ni himu.
Namoota sirnicharratti beekamtii argatan lamaan keessaa isa tokko kan ta'e Artisti Tsaggaayee Dandanaa (Sayyoo), badhaasniifi beekamtiin argate wareegamtoota aadaafi sabasaaniitiif gatii lubbuu kanfalan kanneen akka Eebbisaa Addunyaafi Usmaayyoo Muusaafa'iif akka oolu dubbata.
Walaloo, shubbisa aadaafi ammayyaafi diraamaan godinootaafi magaalota Oromiyaa dorgomsiisaa kan ture sagantichi, magaalotni Naqamtee, Bishooftuufi godinni Gujii walduraa duubaan sadarkaa 1fa hamma 3fa bahaniiru.
Torbeen aadaafi aartii Oromiyaa bara dhufu keessummeessuuf immoo magaalaan Jimmaa carraa argatteerti.
Torban kana/This_Week 7725
Guyyaa mara/All_Days 1817145